Headwear & Fashions Fekitori | China Headwear & Fashions Vagadziri uye Vatengesi
Tsika bandana nechero dhizaini dhizaini kana dhizaini kana yako kambani logo pairi inogona kuita basa rakakura mukusimudzira bhizinesi rako! Zvichakadaro, inogona zvakare kushandiswa sechiso kumeso kubatsira kudzivirira guruva nemhepo yakasviba. Ndiko kukwidziridzwa kwekunze kwekunze kwevanomhanya, vanofamba, vanofamba-famba, mabhasikoro, uye vanofarira kugwinya kwemarudzi ese.
Kuedza kubata pfungwa kumunda? Unoda kukwidziridzira zita uye zita rako wega? Isa mifananidzo yako yaunofarira kana logo uye utitaurire yako dhizaini mazano izvozvi, isu tichagadzirisa ruoko rwemaoko chaizvo nenzira yaunoda iwe! Yakazara-ruvara rwakadhindwa neyakareruka elastic polyester, maoko edu emaoko akakodzera zviitiko zvemitambo, zvipo zvevashandi, zvichingodaro.
Tsika Yemhuri Tafura Yejira
Iko hakuna zvinhu zvakawanda zvinonyanya kunakidza pane kuungana uchitenderedza tafura kuti unakirwe nekudya nemhuri kana shamwari. Yedu tsika tafura jira inogona kubatsira kugadzira kunyange iri nani uye inodziya mamiriro. Iwe unogona kupurinda chero mifananidzo, zvinyorwa kana zvigadzirwa zvaunoda pairi. Nemhando dzakasiyana uye masitayera eatrworks, jira repatafura iri kushongedzwa kwakanaka kwenzvimbo dzakasiyana senge kudya kwemanheru, mhemberero dzekuzvarwa, uye ese marudzi epati yetimu.
Tsika Sofa Inovhara
Iwe unoda inokurumidza, yakapusa uye yezvehupfumi nzira yekushongedza nekumutsiridza imba yako? Iyi yakavharika sofa yekuvhara haingogone kupa kutsva kutsva kwesofa rako, inogona zvakare kubatsira kuchengetedza yako sofa kubva kune zuva nezuva kubvaruka, kudeuka, matanga uye zvichingodaro. Icho chisarudzo chikuru kumisha ine vana nezvipfuyo. Uye ndeye yakasimba mapurasitiki nekuda kweiyo yakatambanudzwa machira uye yakasununguka bhendi dhizaini, nekudaro, inokodzera kune mazhinji marudzi / maumbirwo esofa uye inogona kukugadzira inoyevedza maonero ako.
Tsika Yakadhindwa maAaron
Maaphron akakosha kukuchengetedza iwe wakachena uye kudzivirira micoganisms. Maapuroni edu anogona kunge ari tsika yakadhindwa neyako dhizaini, zvinyorwa kana marogo, nekudaro, haisi chete chishandiso chakanaka kukuchengetedza iwe kana iwe uchibika kana uchiita gadheni basa, zvinogona zvakare kubatsira kusimudzira bhizinesi rako.
Yedu hembe yakagadzirwa neyakareruka elastic polyester. Inogona kushandiswa sechiso kumeso, bhanana, wristband, hood, bvudzi tayi. nezvimwewo nemifananidzo kana logo yaunoda yakadhindwa pairi. Inogona kuve yekushongedza yemafashoni uye zvakare chishandiso chinobata maziso kuti zita rako rizivikanwe.
Tsika dzakadhindwa masherefu inzira yakasarudzika uye yakasarudzika yekupfeka dhizaini yako. Chirafu chakasarudzika iri zvakare nzira inoshamisa yekumisikidza rako pachako zita kana dhizaini yekugadzira. Huya usarudze ako mapatani, dhizaini kana mapikicha kuti utore maitiro ako mumawoko ako nemaSara edu akadhindwa